Hordhac: Bayern Munich vs Chelsea - Fursadaha Blues Kusoo Bixi Karto, Bavaria Oo Colaaddii 2012 U Haysa Chelsea, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey - Gool24.Net
Hordhac: Bayern Munich vs Chelsea – Fursadaha Blues Kusoo Bixi Karto, Bavaria Oo Colaaddii 2012 U Haysa Chelsea, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii U Dambeeyey
Chelsea ayaa ku sugan garoonkii ay sannadkii 2012 ku qaadday Koobka Champions League, waxaanay marti ugu tahay kooxda iska leh garoonka oo ah tii ay waqtigaas rikoodheyaasha kaga guuleysteen, laakiin tababare Frank Lampard oo xilligaas ka mid ahaa ciyaaryahannadii koobka ku guuleystay, waxa uu la tegay Munich niyad-jab iyo lugtii hore ee wareegga 16ka tartanka Champions League ee bishii February ay ku qaabileen Bayern Munich oo lagu sii garaacay 3-0.
Wareegga 16ka tartanka Champions League ayaa lagu soo afjarayaa kulamada caawa, waxaana naadiyada soo baxa ay ku biiri doonaan lix kooxood oo hore u xaqiijistay boosaskooda wareegga siddeedda oo qaab ka duwan sidii hore loogu ciyaari doono waddanka Portugal.
Bayern Munich ayaa fursad weyn u haysata inay usoo gudubto wareegga siddeeda, sababtoo ah, waxay kusii shaqaysatay garoonka Stamford Bridge oo ay 3-0 kusoo burburisay Blues, waxaana xiddigaha kulankaas ahaa Serge Gnabry oo laba gool dhaliyey iyo Robert Lewandowski oo hal gool saxeexay.
Ma jirto taariikhda tartanka Champions League koox kulankii ay martida ahayd ee lugta hore kusoo badisay 3-0 oo haddana hadhay, waana sabab weyn oo culays la’aan ka dhigayasa Napoli, hase yeeshee Blues ayaa iyadana laga doonayaa inay is baadhbaadho oo ay rikoodhkaas jabiso si ay u noqoto kooxdii ugu horreysay ee 92 sannadood oo tartankan Yurub lasoo qabanayay garoonkeeda lagaga sii badiyey 3-0 haddana soo gudubta.
Chelsea waxay ciyaartani ugu soo beegantay xilli ay qalbi jab ku jiraan oo laga qaaday koobka FA Cup oo ay Arsenal si xun ugu karbaashtay finalkii, waxaana u raacaya ganaax ay caawa ku maqan yihiin Jorginho iyo Marcos Alonso, halka ay Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic, Willian iyo Pedro iyaguna dhaawac ku seegayaan ciyaartan, hase yeeshee N’Golo Kante ayaa lagu soo daray liiska kooxda kaddib dhaawac uu in muddo ah ku maqnaa.
Lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee tartanka Champions League, Bayern Munich waxay soo muujisay awood dhamaantoodna way soo badisay, halka Chelsea ay saddex ciyaarood soo badisay, laba barbarro ah iyo mid laga badiyeyna u raaceen.
Ciyaarta: Bayern Munich vs Chelsea
Tartanka: Champions League, lugta labaad ee wareegga 16-ka.
Natiijada lugtii hore: Bayern Munich 3-0 Chelsea
Serge Gnabry oo Chelsea laba gool ka dhaliyey lugtii hore ayaa kulan saaxiibtinimo oo Jimcihii hore ay Bayern Munich la ciyaartay Marseille waxa uu sameeyey dhoolatus kale isaga oo shabaqa taabsiiyey laba gool.
Tababare Flick ayaa bixiyey ishaaro ah inuu shax awood badan oo ay hoggaaminayaan Gnabry iyo Lewandowski kusoo bilaabi doono, kuwaas oo uu garab siin doono Thomas Muller oo ah boqorka caawiyaha kooxda.
Kingsley Coman ayaa ka cabanaya dhaawac muruqa ah, waxaana ka faa’iidaysanaya Ivan Perisic oo diyaar u ah inuu fursaddan qaato si uu ugu qanciyo tababare Flick in boos joogto ah looga baadhbaadho kooxda.
Difaaca adag ee Benjamin Pavarad ayaa dhaawac kaga maqan ciyaarta, waxaanay taasi keenaysaa in Joshua Kimmich uu tago difaaca midig iyadoo uu muddooyinkii dambe wacdaro ka dhigayay khadka dhexe.
Dhinaca Chelsea waxa jira dhaawacyo badan iyo ganaaxyo. Finalkii FA Cup waxay Chelsea ku weyday saddexda ciyaartoy ee Pulisic, Azpilicueta iyo Pedro oo aan waqti ay kusoo kabtaan u helin ciyaartan.
Sidoo kale, xiddiga reer Brazil ee Willian oo kooxda kasii socda ayaa kulankan seegaya, waxaana liiska maqaneyaasha kula jira Jorginho iyo Alonso oo ganaax ah.